Politics & Security Archives - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး ဝမ်ရိနှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Bilawal ဗွီဒီယိုဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းအား ရပ်တံ့ရန် G7 အား တိုက်တွန်း
ဘန်ကောက် ၊ အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်(ဆင်ဟွာ) ထိုင်းနိုင်ငံ ဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပရာဝီဝန်ဆူဝမ်(Prawit Wongsuwan)က ၃၅ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီး အစည်းအဝေး မတိုင်မီ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်တွင်...
Politics & Security3 years ago
ဘန်ကောက်၊ မေ ၂၅ ရက် (ဆင်ဟွာ) ထိုင်းနိုင်ငံ ၏ အမျိုးသားဥပဒေပြုဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဖြစ်သူ Pornpetch Wichitcholchai အား အထက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက် (ဆင်ဟွာ) အာဆီယံပါလီမန်များအထွေထွေညီလာခံဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး (၁၄/၂၀၁၈) ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ ၁၄း၀၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်၊ လွှတ်တော်ဝင်းရှိ ဇမ္ဗူသီရိခန်းမဆောင်၊ အပေါ်ထပ်၊ လွှတ်တော် သင်ကြားရေးဗဟိုဌာန၊ အခန်းအမှတ် (၃) ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
Politics & Security4 years ago
စင်ကာပူ ၊ အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်(ဆင်ဟွာ) ၅ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း(ASEAN) ဝန်ကြီးများ၏ အစည်းအဝေး(ADMM)- (+) ဆက်စပ်အစည်းအဝေးကို စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ အောက်တိုဘာ ၂ဝ ရက်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Wei Fenghe လည်း ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဟနွိုင်း၊ မတ် ၃၁ ရက် (ဆင်ဟွာ) တရုတ်နိုင်ငံတော် ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွတ်ချန်အိုချာတို့သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းမြို့တွင် ကျင်းပသော မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲ (GMS) စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ခြောက်ကြိမ်မြောက် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ဆက်စပ်အစည်းအဝေး၌ တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နေပြည်တော် ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်(ဆင်ဟွာ) မြန်မာနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပသော ၁၃ ကြိမ်မြောက် အေဆမ်(ASEM) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးအား ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် စဉ်ဆက် မပြတ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် ပူးပေါင်းမှု အရှိန် မြှင့်တင်ရေး ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်...
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက် (ဆင်ဟွာ) နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့ဒေသစံတော်ချိန် (၁၀း၀၀) နာရီတွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ Philippines International Convention Centre (PICC) ၌ ကျင်းပသည့် (၃၁)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေး (အာဆီယံနိုင်ငံ အစိုးရအဖွဲ့ အကြီးအကဲများ၏ မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး)သို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း...
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက် (ဆင်ဟွာ) နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့ဒေသစံတော်ချိန် (၀၉း၀၀) နာရီတွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ Cultural Center of the Philippines ၌ ကျင်းပသည့် (၃၁)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန မှ...
Politics & Security5 years ago
ကလက်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ) အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (ASEAN) မှ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးများသည် အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးမှောင်ခိုမှုနှင့် ပင်လယ်ရေကြောင်း ပဋိပက္ခများ အပါအဝင် ဒေသတွင်း ရင်ဆိုင်နေရသည့် လုံခြုံရေး ကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေးရန် အဆင့်မြင့် လုံခြုံရေး ဆွေးနွေးပွဲအား ယနေ့...
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက် (ဆင်ဟွာ) ရန်ကုန်မြို့တွင် (၂၂) ကြိမ်မြောက်World Police Band Concert (ကမ္ဘာ့ရဲတပ်ဖွဲ့ တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲ) အခမ်းအနားကို ၂၈.၁၀.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် စုပေါင်းလမ်းလျှောက် တီးခတ်ဖျော်ဖြေခြင်းများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ၂၉.၁၀.၂၀၁၇ နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ MCC ( Myanmar Convention Centre...
International Organizations22 mins ago
ရှင်းကျန်းဒေသတွင်ပြည်သူများ သွားလာရေးအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် မြန်နှုန်းလျော့ သမားရိုကျ ပုံမှန်ရထားများပြေးဆွဲ
တရုတ်နိုင်ငံက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲချောမွေ့စွာပြီးဆုံးမှုအပေါ် ဂုဏ်ပြု
တရုတ်နိုင်ငံမှ တည်ဆောက်နေသည့် အာကာသစခန်းတည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ
Archived News Select Month May 2022 (164) April 2022 (380) March 2022 (463) February 2022 (426) January 2022 (425) December 2021 (416) November 2021 (401) October 2021 (309) September 2021 (342) August 2021 (303) July 2021 (305) June 2021 (433) May 2021 (376) April 2021 (267) March 2021 (193) February 2021 (154) January 2021 (464) December 2020 (480) November 2020 (394) October 2020 (450) September 2020 (447) August 2020 (531) July 2020 (490) June 2020 (450) May 2020 (436) April 2020 (424) March 2020 (436) February 2020 (339) January 2020 (313) December 2019 (408) November 2019 (361) October 2019 (410) September 2019 (424) August 2019 (392) July 2019 (448) June 2019 (393) May 2019 (455) April 2019 (448) March 2019 (493) February 2019 (471) January 2019 (527) December 2018 (508) November 2018 (476) October 2018 (537) September 2018 (500) August 2018 (557) July 2018 (565) June 2018 (579) May 2018 (565) April 2018 (483) March 2018 (577) February 2018 (470) January 2018 (470) December 2017 (408) November 2017 (449) October 2017 (482) September 2017 (492) August 2017 (521) July 2017 (552) June 2017 (512) May 2017 (446) April 2017 (401) March 2017 (466) February 2017 (460) January 2017 (568) December 2016 (439) November 2016 (467) October 2016 (475) September 2016 (483) August 2016 (531) July 2016 (513) June 2016 (482) May 2016 (546) April 2016 (401) March 2016 (454) February 2016 (435) January 2016 (363) December 2015 (366) November 2015 (329) October 2015 (348) September 2015 (282) August 2015 (282) July 2015 (269) June 2015 (117) May 2015 (127) April 2015 (67) March 2015 (48) February 2015 (89) January 2015 (67) November 2014 (2) August 2014 (3) December 2013 (1)